Anyị na -emepụta ngwaahịa dị elu, yana akwụkwọ ikike afọ 2.
Usoro mmepụta ihe na akpaaka na -eme ka arụmọrụ dị elu.
Kemgbe 1990, anyị na -enye ngwaahịa dị iche iche maka nhọrọ gị.
Ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị. Ndị ọkachamara anyị nọ ebe a oge niile maka gị 7x24hrs.
Sprockets na ngalaba maka excavators na dozer ...
Lelee Ngwaahịa niile
Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa nke Quanzhou Hongda Machinery Co., Ltd.
E guzobere HONGDA na 1990, nke dị na Quanzhou, obodo ama ama nke ndị China esenidụt, nwere ogologo akụkọ ihe mere eme, akụ na ụba na-aga nke ọma na gburugburu ebe mara mma. Fujian jinjia Machiery Co., Ltd bụ enyemaka Hongda.
Nzukọ ọmụmụ ihe azụmaahịa mba ofesi Quanzhou 2021
Nyocha gbasara ihe egwu dị na nkwekọrịta azụmaahịa mba ofesi-onye ọka iwu Huang Qiang A na-ajụkarị ajụjụ: nhazi nkwekọrịta, omume mkpọsa, okwu ụlọ ọrụ, nnyefe oge, okwu dị mma, okwu azụmaahịa, ego ụgwọ, nnyefe nkwụghachi ụgwọ, ụgwọ maka mmebi iwu ...
Ka anyị wee mata ibe anyị nke ọma ma kwalite ọrụ otu maka JINJIA MACHINERY anyị, ụlọ ọrụ anyị haziri ndị ọrụ niile ka ha nwee ọrụ otu na mpụga na June 16th, 2021. Isiokwu mmemme ahụ bụ "Ịdị n'otu na imekọ ihe ọnụ - imekọ ihe ọnụ". Anyị malitere na ...
Ductile Iron factory tọrọ ntọala kemgbe 2021 1. Nkowa nkenke: Ductile cast iron bụ ihe siri ike siri ike nke e mepụtara na 1950. Ọrụ ya zuru oke dị nso na nke nchara. Dabere na ya magburu onwe arụmọrụ, ọ na -succe ...